Jeneraal Itoobiyan ah Ayaa u Sheegay Diblomaasiyiinta in ay ku Jiraan ‘Dagaalka Wasakhaysan’ oo ka Socda Tigray – Rasaasa News
Jeneraal Itoobiyan ah Ayaa u Sheegay Diblomaasiyiinta in ay ku Jiraan ‘Dagaalka Wasakhaysan’ oo ka Socda Tigray
Jijiga, Mar 16, 2021 – Dagaal wasakh ah “oo dhib u keenaya dhibanayaasha” aan difaac lahayn “ayaa ka socda waqooyiga gobolka Tigreega ee Itoobiya, jeneraal ayaa ku sheegay warbixin uu siiyay diblomaasiyiinta todobaadkii la soo dhaafay, sida laga soo xigtay cod laga duubay hadaladiisa oo ay heshay AFP.
Hadalka ka soo yeeray General Yohannes Gebremeskel Tesfamariam, oo madax ka ah guddi howleed loo sameeyay ka jawaab celinta colaadda Tigray, ayaa ka dhigan qiimeyn aan caadi ahayn oo lagu sameynayo xaaladaha ka jira gobolka, halkaas oo xukuumadda ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ay caddaysay in xaaladu caadi ku soo noqoneyso.
“Tani waa dagaal wasakh ah maxaa yeelay wax walba ayay saameyneysaa. Arki meysid wajiyo hore. Qiimahaas ayaa xaalada isla markiiba ka dhigaya kuwa aan difaaci karin,” ayuu yiri Johnnes intii lagu guda jiray warbixintii 11-kii Maarso ee xarunta gobolka Mekele oo ay ka soo qeybgaleen daraasiin diblomaasiyiin ah.
Dhibaatooyinka kufsiga dambi idinma siin karo caddeyn la taaban karo, laakiin uma maleynayo inaan nasiib u yeelan doono inaan aragno in waxyaalahan oo kale aysan dhicin. Maqalka codka waxaa xaqiijiyey laba qof oo ka soo qayb galay warbixinta.
Abiy, oo ku guuleystay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee 2019, ayaa ciidamo u diray Tigreega 4-tii Nofeembar ka dib markii uu ku eedeeyay xisbiga talada haya gobolka oo mar xukumi jiray, Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF), weeraradii ka dhacay xeryaha ciidanka.
Diidmada isgaarsiinta ayaa adkeysay in la hubiyo xaaladaha ka jira dhulka muddo toddobaadyo ah, in kasta oo marin u helidda ay soo fiicnaatay dhawaanahan hay’adaha samafalka iyo warbaahinta
Booqashadii 11-kii Maarso ee Mekele waxay ahayd markii ugu horreysay ee diblomaasiyiinta badankood wax galaangal ah ku yeeshaan gobolka tan iyo markii dagaalku billowday
Laakiin inkasta oo ay dad badani filanayeen inay booqan doonaan isbitaal iyo goobo ay degan yihiin qoomiyadda Tigreega ee barokacay, ayaa markii loo yimid loo sheegay in joogitaankoodu uu ku koobnaan doono warbixin kooban oo hudheel ah.
Abiy wuxuu ku dhawaaqay guushii Tigreega dabayaaqadii bishii Nofeembar ka dib markay ciidamada federaalku qabsadeen Mekele, in kasta oo hoggaamiyeyaasha TPLF ay ku sii dhuumaaleysanayaan oo dagaalladuna ay sii socdeen.
Dadka deegaanka ayaa u sheegay kooxaha xuquuqda aadanaha iyo suxufiyiinta xasuuqa, rabshadaha galmada ee baahsan iyo dilalka aan kala sooca lahayn ee ciidamada amniga ay u geystaan dadka rayidka ah.
Shaqaalaha gargaarka ayaa dhanka kale sheegaya in nidaamka caafimaad ee gobolku uu si weyn u burburay waxayna ka digayaan macaluul baaxad weyn oo dhici karta.
Faallada uu siiyay diblomaasiyiinta, Yohannes wuxuu soo jeediyay inuusan arkin sida qaab militari oo kaliya loogu joojinayo khilaafka.
“Waan ogahay in ay aad u yar yihiin khilaafaadka gaarka ah ama rabshadaha – ama dagaalada, aan idhaahdo – kuwaas oo ku dhamaaday kaliya qori. Aad ayay u yar yihiin,” ayuu yidhi Yohannes, oo horey taliye uga ahaan jiray ciidamada nabad ilaalinta ee UN-ka ee South Sudan.
Wuxuu yiri “farsamooyinka kale” waxay u baahan doonaan in laga fiirsado, oo ay ku jiraan wadahadalada iyo baaqyada xabad joojinta, in kasta oo uusan isagu soo bandhigin soo jeedin gaar ah.
“Waxaan rumeysanahay inay tani tahay waddada looga baxo. Uma maleynayo inaan ka baxsan doonno howshan,” ayuu yiri.
Xukuumada Abiy ayaa marar badan ku celcelisay in hogaamiyaasha kooxda TPLF ay u baahan yihiin in la xiro oo hubka laga dhigo.
ONLF Members Face Constant Harassment in the Somali Regional State
Colaad ka Jirta Gudaha Itoobiya Ayaa Loo Adeegsanayaa in Lagu Xaliyo Muran Dhuleed Soo Jireen ah oo u Dhexeeya Laba ka mid ah Maamul Goboleedyadeeda Waqooyiga.